के सरकार भ्रष्ट भए लोडसेडिङ र मूल्य नियन्त्रण हुन्छ बाबुराम जी ? - Everest Dainik - News from Nepal
के सरकार भ्रष्ट भए लोडसेडिङ र मूल्य नियन्त्रण हुन्छ बाबुराम जी ?
दुनियाँ हँसाउने गरी किन बर्बराउँदैछन् बाबुराम ?
पछिल्लो समयमा बाबुराम भट्टराईले बिभिन्न स्थानमा पुगेर सरकारको कटु आलोचना गरिरहेका छन् । उनको आलोचनाको बोली चुनाव चिन्ह नपाएपछि झनै चर्किएको छ । यतिसम्म कि एउटा अब्बल राजनीतिक अर्थशास्त्रीको रुपमा परिचय पाएका बाबुरामले प्रचण्ड सरकारलाई इतिहास कै भ्रष्ट सरकारको समेत संज्ञा दिएका छन् ।
के बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक एजेण्डा सकिएका हुन त ? यतिखेर आमरुपमा बाबुरामलाई माया गर्ने र उनको चिन्ता लिनेहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ?
प्रचण्ड सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपका सबै चाहना पुरा गर्न सकेको छैन । यो यथार्थ हो । अहिलेको बुर्जुवा राज्यव्यवस्थामा यो सम्भव पनि छैन । यहाँ यथास्थितिलाई सकेसम्म परिवर्तन गर्ने र जति सकिन्छ अधिकतम् सुधारको प्रयास मात्रै गर्न सकिने हो । राजनीतिक अर्थशास्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका बाबुरामले यो तथ्य नबुझेका होइनन् । तर उनले सरकारलाई भ्रष्ट र अझ इतिहासकै भ्रष्ट भन्ने आरोप लगाएपछि उनको छटपटी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक एजेण्डा सकिएपछि, राजनीतिक तर्कको अन्त्य भएपछि मानिसले गालीको सहारा लिन्छ । यो कुरा बाबुरामले नै लेनिनलाई उद्दृत गर्दै धेरैपल्ट लेखनमा र भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले उनी आफै यसको उदाहरण बनेका छन् । चुनाव चिन्ह नपाएको झोंकमा उनले आफैले अध्ययन गरेका राजनीति र अर्थशास्त्रका नियमहरुको धज्जी उडाएका छन् । के अर्थमा प्रचण्ड सरकार भष्ट हो, के अर्थमा प्रचण्ड सरकार निरंकुश हो भन्ने कुराको बाबुरामले जवाफ दिन सक्दैनन् । उनको दलले भनेको रोजेको चुनाव चिन्ह पाएनन, त्यसै कारण सरकार भ्रष्ट र निरंकुश हो भन्ने तर्क कम्तीमा बाबुरामको मुखबाट सुन्नु इतिहासकै लज्जाष्पद विषय भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
बाबुराम जी, के आर्थिक र मानवीय परिसूचकहरुले यो सरकार इतिहासकै भ्रष्ट सरकार देखाउँछन् त ? मुद्रास्फितिको राम्रो ज्ञान तपाईलाई छ । आर्थिक मन्दी र स्फितिका लागि कस्तो सरकारको के भूमिका हुन्छ, हामीले बताइरहनुपर्छ र ? तपाईले त भान्सामा दैनिक तरकारी किन्नुपर्दैन, न त दूध, चिनि, तेल किन्न पसल जानुपर्छ, तर आम नागरिकलाई त कम्तीमा यो वर्ष महंगीले आच्छुआच्छु पारेन । के बढी भ्रष्ट सरकार भए मूल्य नियन्त्रण हुन्छ ?
तपाई पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तपाईको पालमा पनि देशमा यत्तिकै (केही कम होला) बिजुली निस्किन्थ्यो । तर लोडसेडिङको अवस्था उस्तै थियो । अहिले हामीले आधा घण्टा प्राविधिक कारणले पनि बिजुली जाँदा आत्तिने अवस्था आएको छ । के भ्रष्ट सरकार भएको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य हुने हो बाबुराम जी ?
याे पनि पढ्नुस यसकारण एक्लो भए बाबुराम, पौडेल समूह सम्बन्ध बिच्छेदको अन्तिम तयारीमा
मेलम्चीदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । फाष्ट ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने कुरा छ । चीनले रेल निर्माणका लागि सहमति जनाएको छ । सुक्खा बन्दरगाहको कुरा अगाडि बढेको छ । भूकम्पपीडितहरुले भनेजस्तो सहज नभएपनि मात्रात्मकरुपमा केही पाएका छन् । यिनै आधारहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ६ प्रतिशत बढी हुनसक्ने एशियाली विकास बैंकले आँकलन गरेको छ । के भ्रष्ट र निरंकुश सरकार भए आर्थिक बृद्धि दर बढ्छ र बाबुराम जी ।
विदेशमा बसेका नेपालीहरुमा आसा पलाएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुलाई नियन्त्रणका दिशामा सार्थक प्रगति हुन बाँकी भएपनि विदेशमा नेपालीहरुको अवस्था सुधार्न, समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने कामले ठूलो प्रभाव पारेको छ । के भ्रष्ट र निरंकुश सरकारमा आम जनतालाई सरकारले सहयोग गर्ने हो र बाबुराम जी ?
के सरकार निरंकुश भएकै कारण संविधानमा अधिकतम समर्थन र स्वामित्व खोजिरहेको हो ? निरंकुश भएकै कारण मधेसी, दलित, जनजातिका माग संबोधन गरौं भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ? के भन्छ तपाईको राजनीतिक सिद्दान्तले ?
याे पनि पढ्नुस बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण
कुतर्क गरेर आफ्नो छटपटी ढाक्न सकिएला, तर यसले तथ्यहरुलाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रचण्ड सरकारले सबै राम्रो गरेको होला भन्न सकिन्न । सरकारले अपेक्षा गरे अनुरुप काम गर्न नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले स्वीकार्छन् । बाहिरबाट सोच्नु र सत्तामा पुगेर चौतर्फी डीलगर्नुमा के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई बढी थाहा छ । तर भ्रष्ट र निरंकुश नै भनेर आरोप लगाउँदा कम्तीमा झोलामा तथ्य राख्नुपर्दैन ? कि बाबुराम भट्टराईको नयाँ अर्थशास्त्रका नयाँ नियमहरुले यस्तै भन्छन् ?
चुनाव चिन्ह पाउनु भएन भने आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा जनतामा जानुस् । कसैले रोकेको छैन । तर चुनावमा चिन्ह नपाएको झोंकमा तर्कको साटो कुतर्कमा उत्रिनु भयो भने तपाईको विद्वतालाई नै यसले स्खलित गर्छ । यो कुरा हामीले भन्दा बढी तपाईले नै थाहा पाएको कुरा हो । प्रहसनको विषय बनेर चुनावमा जितिन्न भन्ने कुरा कम्तीमा १८ औं बु्रमेयरको निकै उदाहरण दिने तपाईले नसोचेकै राम्रो
ट्याग्स: Baburam Bhattarai, naya shakti nepal